Wasiir Cawad oo ceeb iyo fadeexad Ka tagi doona – XAMAR POST
Wasiir Cawad oo ceeb iyo fadeexad kala tagi doona
By Mohamed Ahmed Last updated Aug 15, 2020
Wassaraadii uu soo maamulayay 2,di Sano iyo barkii u dambeeyey.
Waxaa isa soo taraya fadeexooyinka musuqmaasuq iyo wax is dabamarin ee aadka ubaahsan ee uu kukac sii hayaha xilka Wasiirka Arrimaaha Dibadda Axmed Ciise Cawad muddadii uu Wasiirka ahaa illaa haddana uu sii wado isagoo noqday, Wasiirkii ugu tayada xumaa/ liitay ee Soomara taariikhda Wasaaradda si buuxdana u baabi,iyay tayadii, haykalkii iyo qaab dhismeedkii shaqo ee Wasaaradda.
Wasiir Cawad waa nin ku caan baxay musuqmaasuq, qabyaalad iyo eex aan geed loogu gaban, sidoo kale wuxuu ka caada dhigtay laaluushka & tahriibinta dadka si uu u sameeyo lacag badan mudada uu xilka hayay.
Axmed Ciise waa Wasiirkii u horreeyay ee u magacowdo qof uqaabilsan arrimaha tahriibka & iibinta fiisooyinka dadka usocda dalalka Yurub, Turkiga, Maraykanka, iyo dadka loo magacaabo Safaaradaha dibadda oo la sheegay in laga qaato lacago aad u farabadan, kaasoo ah wiil uu adeer uyahay oo magiciisa lugu sheegay (Suhayr).
Raisulwasasrihii hore Mudane Xasan Cali Khayre oo islamarkiiba si deg deg u arkay eexda iyo musuqmaasuqa Axmed Cawad iyo inuusan uqalmin in uu sii ahaado Wasiir Arrima dibadeed ayaa dhowr jeer go,aansaday inuu xilka kaqaado, isagoo u gudbiyay madaxwaynaha waxa uu ka shaqeeyo, laakiin nasiib darro Madaxweynaha oo ay isku beelyihiin ayaa hortaagay oo ka diiday in xilka laga qaado.